यसको मतलब के हो यदि तपाईको जन्मदिन १ जनवरी मा छ? - राशिफल
यसको मतलब के हो यदि तपाईको जन्मदिन १ जनवरी मा छ?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - जनवरी १ जन्मदिन राशिफल
यदि तपाईं जनवरी १ मा जन्मनुभयो भने, तपाईं धेरै विशेष हुनुहुन्छ। तपाईंको अगाडि एक अपवादात्मक वर्ष छ त्यसैले तपाईंको मार्गमा आउने लागि तयार रहनुहोस्! जनवरी १ राशिफल छमकर। यो एक नेता को सकारात्मक संकेत हो।
तथ्य पद तपाईको जन्म महिनाले तपाईलाई प्रकट गर्ने कुराहरु प्रस्तुत गर्दछ जनवरीमा जन्मेका बच्चाहरु हठी र कट्टरपन्थी मानिन्छ जब उनीहरू बढ्दै जान्छन् महत्वाकांक्षी हुन जान्छन् जनवरीमा तपाई जन्मेका मानिसहरु तपाई मान्छे हेर्नुहुन्छ र अध्ययन गर्ने तरिका अध्ययन गर्ने तरीका अरूको बारेमा र आफैंको बारेमा जनवरी बच्चाहरूको पनि उनीहरूको सँगी मानवलाई सिकाउने र उनीहरूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्ने प्रबल इच्छा हुन्छ। फेब्रुअरी, यदि तपाइँ फेब्रुअरीमा जन्मनुभएको थियो भने, तिनीहरू धेरै कलात्मक र रचनात्मक हुन सक्छन् र कहिलेकाँहि विद्रोही हुन सक्छन् राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू उनीहरूको व्यक्तित्वसँग साँच्चिकै सम्पर्कमा हुन्छन् र उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर जान्छन् फेब्रुअरी बच्चाहरू कहिलेकाहीं आक्रामक हुन सक्छन्, तर तिनीहरूले पनि एक संवेदनशील पक्ष छ कि मानिसहरूले वास्तव मा कदर गर्दछ। मार्चको जन्ममा अरूको भन्दा धेरै लजालु हुनु भनेको तपाईलाई आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व लुकाउने ठान्नुहुन्छ तपाईलाई कसैलाई राम्ररी थाहा नहुँदासम्म मार्चका बच्चाहरू प्रायः सबैलाई राम्रो लाग्छन् र उनीहरू सबैले सँगै बस्न चाहेको बताउछन् सद्भावका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मार्चमा जन्मिएका मार्चका बच्चाहरू धेरै विश्वासयोग्य हुन्छन् यो सत्य हो कि भरोसा भंग नभएसम्म सबै शर्तहरू बन्द हुन्छ अप्रिलका बच्चाहरू प्राय: कडा र खेलकुद हुन्छन्, तिनीहरू जहिले पनि अप्रिलमा जन्मेका मानिसहरूले ध्यान मन पराउँछन् र उनीहरूले रोमाञ्च खोज्छन्।
कारण तिनीहरू सधैं हडबडमा हुन्छन् किनकी तिनीहरू अर्को एड्रेनालाईन भीडको खोजी गर्दैछन् अप्रिल शिशुहरू सामान्यतया कुनै पलंग हुँदैनन् यदि तपाई अप्रिलमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईको जीवनमा धेरै क्रियाकलाप र साहस हुन्छ। मेमा जन्मेका धेरै मानिसहरू धेरै आकर्षक हुन मन पराउँछन्, उनीहरूले आफ्नो बाँया मस्तिष्क उनीहरूको दाहिने मस्तिष्क भन्दा बढी प्रयोग गर्दछन्, जसको अर्थ तिनीहरू संख्याको तुलनामा बढी तार्किक हुन्छन् र तथ्यहरू खुसी हुन तिनीहरू खुशी छन् उनीहरू सुतेका छन् र उनीहरूको लागि पनि भविष्यमा जब तपाईं मेमा जन्मनुहुन्छ तपाईं दिनको समयमा तर्क प्रयोग गर्नुहुन्छ र रातमा ठूलो सपना देख्नुहुन्छ। जुन जूनका बच्चाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् जुन जूनमा जन्मिएको कसैलाई दु: खी पार्न धेरै लिँदैन, तर उनीहरूले तपाईंलाई थाहा दिँदैन।
यो किनभने तिनीहरू अत्यन्त विनम्र जूनका बच्चाहरू नरम-स्पोकन हुन जान्छन्, तर उनीहरूको शान्तिको कारणले मानिसहरू उनीहरूको कुरा सुन्दछन् र उनीहरूको सल्लाहलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्। यदि तपाईं जूनको बच्चा हुनुहुन्छ भने अरू मानिसहरूलाई खुसी पार्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं अर्को व्यक्तिको समान चीज चाहानुहुन्छ, यदि तपाईं अरूको लागि अलग रहन सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं जुलाईको अवसरमा जन्मनुभयो भने तपाईं सधैं ऊर्जाले भरि हुनुहुन्छ भने एक व्यक्ति यो रमाईलो छ आफ्नो साथीहरू संग तपाईंको आगोको व्यक्तित्व हेर्न र तपाइँसँग समय खर्च गर्न को लागी बनाउन कि तपाईं संग ऊर्जा छ कि मानिसहरूलाई एक बनाउन लाग्न सक्छ तपाईं संग केहि भन्न को लागी, यो केवल एक सेकेन्ड लाग्छ खुशीको साथ फिर्ता आउन अगस्ट बच्चाहरू आउँदैछ हास्यले भरिएको छ उनीहरू हाँस्न मन पराउँछन् र उनीहरुलाई अन्य मानिसहरु लाई हाँस्न मन पराउँछन् उनीहरु यो हास्यलाई ब्यबहार गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ यदि तपाई अगस्तमा जन्मनु भएको छ भने तपाई एउटा जन्मने नेता हुनुहुन्छ अगस्ट शिशुहरु यी नेतृत्व सीपहरु को उपयोग गर्न को लागी दुबै ब्यापारमा सेप्टेम्बर बच्चाहरु हुन्छन्। धेरै विवरण-उन्मुख छन् यदि तिनीहरू सेप्टेम्बरमा जन्मेका थिए भने तपाई सायद एक सिद्धताको अपेक्षा राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईसँग जहिले पनि सबै कुरा पूर्ण हुनुपर्दछ र तपाईले अपेक्षा गर्नुहुन्छ कि ब्यापारका मानिससँगसँगै तपाईको निजी जीवनबाट सेप्टेम्बर बच्चाहरू धेरै उच्च अपेक्षा गर्छन्। संगठन र विवरणको लागि आयनहरू र यदि कसैले छोटो भयो भने, सेप्टेम्बरको धेरै चाँडै आलोचना हुनेछ अक्टुबर अक्टुबरका बच्चाहरू धेरै हल्का र लापरवाह हुन्छन्, तिनीहरू अत्यन्त स्वतन्त्र हुन्छन्, जब तिनीहरू सेप्टेम्बरमा जन्मेका थिए तपाईं प्रायः उज्ज्वल पक्षमा हेर्नुहुन्छ, यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने। उज्ज्वल पक्ष तत्काल हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंले धेरै व्यक्तिहरू खोज्नुपर्दछ, अक्टोबरमा जन्मेका मानिसहरू जहाँसुकै गए पनि उनीहरू रमाइलो र रमाईलो छन् किनभने अक्टुबर बच्चाहरू रमाईलो र कुराकानी गर्ने हुन्छन्, तिनीहरूलाई मित्र बनाउनको लागि यसले सजिलो बनाउँदछ। नोभेम्बर, यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मनुभयो भने त्यहाँ ती कुराहरू हुन्छन् जुन तपाईंको जन्म महिनाले तपाईंको बारेमा बताउन सक्छ नवम्बर शिशुहरू धेरै हठी र धेरै गोप्य हुन्छन् जब नोभेम्बरमा बच्चा वास्तवमै केन्द्रित हुन्छ भने महानताको लागि खराब सम्भावना यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईं सम्भावित हुनुहुन्छ धेरै छिटो र स्वप्रेरित नवम्बर शिशुहरू कहिलेकाँही कसैको गल्तीबाट मद्दत चाहँदैनन्, यदि कसैले नोभेम्बरको बच्चालाई मद्दत गर्दछ भने उनीहरूले लिने छैनन्। यी व्यक्तिहरू खुसी छैनन् जबसम्म तिनीहरू आफैंले केही गर्न सक्दैनन् यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाईं हुर्कन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं डिसेम्बर बन्न चाहानुहुन्छ भने बच्चाहरू रमाइलो हुन्छन् र उनीहरू ध्यानको केन्द्र बन्न चाहन्छन् जब तिनीहरू एक मा हुन्छन्। कोठा मान्छेले भरिएको सबै ध्यान उनीहरूलाई तिर्नु पर्छ यदि तपाईं डिसेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाई घरमा टिभी हेर्दै धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ जुन तपाईंको चियाको कप होइन डिसेम्बरका बच्चाहरू आफैमा गर्व गर्छन् र तिनीहरूलाई उनीहरू चाहँदैनन्। कुनै चीजले पछाडि समात्नुहोस् जब तिनीहरू कुनै चीजले बाधा पुर्‍याउँछन्, तिनीहरू आफैलाई बचाउनमा कुनै समस्या हुँदैन r ibe हामीलाई तलको टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस् र तपाईं अधिकको लागि सदस्यता लिनुहोस्।
मकर संग के उपयुक्त छ?
सबैभन्दामिल्दोसंग संकेतमकरसामान्यतया वृष, कन्या, वृश्चिक र मीन मानिन्छ। कम्तीमामिल्दोसंग संकेतमकरसामान्यतया मेष र तुला मानिन्छ।
मकर राशि सर्वश्रेष्ठ खेल - शीर्ष Sign संकेत। हे साथीहरु मँ मँ तपाईको प्रश्नको उत्तर दिदैछु मकर महिलाको लागि सबैभन्दा उत्तम संकेत के हो।
यदि तपाइँ डिसेम्बरको उत्तरार्धमा जनवरीको बीचमा जन्मनुभएको थियो भने यो लेख तपाइँको लागि हो। मनिर रहनुहोस् र तपाइँ मकरको प्रेम सम्बन्धको बारे जान्न सबै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ। सम्बन्धमा यो महिलासँग सम्झौता गर्ने जो कोही पुरुषले उनलाई सम्भावित पत्नी मान्दछन् घर चलाउन र बच्चाहरूलाई हुर्काउन।
र यो अचेत हुँदै जान्छ किनकि पृथ्वीको सबै लक्षणहरू, मकर, कन्या र वृषभ, तिनीहरू आधारभूत र गम्भीर व्यक्ति हुन् जो स्थिर विवाह र आपसी प्रेमको ग्यारेन्टी हुन सक्छन् जब यो विवाहित जीवनको लागि आउँदछ, तर मकर महिलाको बारेमा कुरा गर्दा, यो कुनै महिला जो एक यादृच्छिक मानिस संग बस्न छैन। अहँ, उनी बरु वर्षौंसम्म अविवाहित रहन्छिन जबसम्म उनी वास्तविक मानिससँग भेट गर्दिनन् जसलाई उनी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्न सक्दछन्।
त्यसोभए यदि तपाइँ मकरुको प्रतीक अन्तर्गत जन्मनुभएको थियो भने म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईंको विचार गर्नुहोस् कि तपाईंको सम्भावित साथी एक उत्तम चरित्र कोटी हो जुन मैले अहिले घोषणा गरिरहेको छु। आजको सूचीमा नम्बर एक क्यान्सर मानिस हो। यो मूडी र शान्त सहज पुरुष मकर महिलाको लागि सबै भन्दा राम्रो साझेदार हुन सक्छ।
ऊसँग सँधै पैसा हुन्छ जब उसले भन्छ कि ऊ छैन र ऊ पारिवारिक जीवनको हिसाबले अद्भुत पति हो। त्यसकारण तपाईंसँग सम्बन्धमा कहिले पनि समस्याहरू हुने छैनन्। मेरो मतलब आर्थिक दृष्टिकोणबाट हो।
मकर राशि महिला र क्यान्सर मानिस पनि बच्चा हुर्काउने प्रक्रियामा समान दृष्टिकोण राख्दछन्। यसैबीच, अन्य राशि चिन्हहरूले ख्याति, क्यारियर र अन्य व्यक्तिको मान्यता, मकर-क्यान्सर दम्पतीहरूको पीछा गरिरहेका छन्, तिनीहरू अधिक पारिवारिक उन्मुख व्यक्ति हुन्। उनीहरूको समय बेकारका चीजहरूमा व्यर्थ हुँदैन किनभने उनीहरूको बच्चाहरूको हेरचाह गर्दै छन् र टेबलमा कसरी उत्तम र स्वस्थ खाना हुन्छन्।
परम्परा र रूढीवादी मनोवृत्ति दुई आधारभूत चीजहरू हुन् जसले मकर र क्यान्सर सँगसँगै जान्छन्, यसैले तिनीहरू एक अर्कालाई बुझ्छन् यसका अतिरिक्त, मकर महिला आफ्नो जीवनसाथीका बाबुआमाको लागि सबैभन्दा वफादार राशि हो, जुन वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हो। क्यान्सर पुरुषहरू किनभने आमा र बुबा उसको जीवनमा नम्बर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। र मकर राशि का केटीहरू जहिले पनि तिनीहरूलाई कसरी जान्ने जान्छन्, जुन उनीहरूको क्यान्सर प्रभावशाली साथीको आँखामा प्रभावशाली देखिन्छ।
यदि तपाईले मलाई सोध्नुभयो कि विवाहको लागि उत्तम मकर महिला के हो भने, म निश्चित रूपमा तिमीलाई भन्नेछु - मीन मानिस। उहाँ यस सूचीमा दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ। अवश्य पनि ऊ क्यान्सर पुरुष जत्तिकै धनी र परिवारमुखी छैन, तर मीन प्रकार ट्रिकर र बढी भयानक छ।
उनीसँग दैनिक संचारमा महिलाहरूसँग कहिले पनि समस्या हुँदैन। तर यसको दोहोरो चरित्रको कारण, हरेक महिलाले उनलाई बुझ्न सक्दैन। भाग्यवस, त्यहाँ एक मात्र केटी छ जसले उहाँप्रति सहिष्णुता देखाउन सक्षम छ र त्यो मकर महिला हो।
उनको अनुकम्पापूर्ण प्रकृति र अन्य व्यक्तिहरूप्रति दया जगाउने दृढ इच्छाको कारणले, उनी जहिले पनि व्यापार गर्छिन् प्रत्येक पुरुषको भरोसा प्राप्त गर्ने उपायहरू फेला पार्छिन्। र पक्कै माछा माछा पनि यसको अपवाद छैन। शाब्दिक रूपमा, उहाँ तिनीहरूलाई चाहानुहुन्छ जे गर्न अझ राम्रो गर्नुहुन्छ।
त्यसैले मँ भन्दछु मकर- मीन सम्बन्ध धेरै आशाजनक देखिन्छ। दुबै राम्रा मनोवैज्ञानिकहरू हुन् जसले जान्दछन् कि कसरी उनीहरूको प्रेम जीवनलाई फूलको रूपमा फुल्न। नम्बर तीन, जुन मकर महिलाको लागि पनि उत्तम राशि चिन्ह हो।इस वृषभ।
जब यो व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा आउँछ, यो केटा सधैं आफ्नो महिला प्रति एक गम्भीर दृष्टिकोण देखाउँदछ, विशेष गरी जब उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। तर मकर राशिको केटीको लागि उसको सहानुभूति जित्नु कुनै गाह्रो काम होइन, किनकि उहाँसँग उही व्यक्तिगत मूल्यमान्यताहरू र रूचिहरू छन्। त्यसकारण, समान चरित्रको महिला र दीर्घकालीन सम्बन्धका लागि गम्भीर इरादाका लागि, वृषभ मानिस केहि पनि गर्न तयार छ।
ऊ शान्त आज्ञाकारी पति पनि हुन सक्छ जसले सम्पूर्ण पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्छ। तर यदि तपाईं उहाँबाट एक छिटो विवाह प्रस्ताव प्राप्त गर्न को लागी आशा गर्नुहुन्छ। हतारमा नहुनुहोस्।
यो लामो समय लाग्छ तपाईं 'मलाई विवाह' भनेर भन्न। मकरले खेल नम्बर चार मन पराउँदछ। कन्या मानिस।
उहाँ यस महिलाका लागि पनि एक महान जीवनसाथी हुनुहुन्छ, तर उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जससँग सम्बन्धमा संघर्ष गर्न सक्नुहुन्छ। यो केटाले आफ्नी पत्नीको रूप र दैनिक बानीको पनि माग गरिरहेको छ। मेरो मतलब, यदि तपाईं मकर महिला हुनुहुन्छ जो धूम्रपान गर्नुहुन्थ्यो र केही हल्का मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो कुमारी साथी संग धेरै तर्क गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाइँ तपाइँ तपाइँको चरित्र सादगी र प्राकृतिक स्त्रीत्व देखाउन, तपाइँ शाब्दिक एक ज्याकपोट जीत। किनभने एक कन्या पुरुषलाई मकर महिलाको प्रेममा पर्नको निम्ति मात्र तरिका एक शिक्षित र अपेक्षाकृत एक्लो केटी हुनु हो।
कि उसलाई खोल्छ। उहाँ सिद्धतावादी हुनुहुन्छ। र उहाँ पनि आफ्नो प्रेमिका सिद्धतावादी हुन चाहन्छ।
के तपाईं यसका लागि तयार हुनुहुन्छ मकर महिलाको लागि उत्तम के हो? नम्बर Sc वृश्चिक मानिस। ऊ वास्तवमै त्यो ज्योतिषीय व्यक्तित्व हो जुन उनीसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहन सक्दछ।
किनभने यो कुम्भ जस्तो अप्रत्याशित र मेषको चिन्ह जस्ता ज्वलनशील हुन उसको लागि विशिष्ट छैन। वृश्चिक पुरुषहरू विवाहको लागि महिला रिकर्न महिलासँगको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा धेरै विशिष्ट हुन्छन्, तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ, यो १००% गम्भीर छ। उसलाई थाहा छ कि वास्तविक प्रेम के हो, त्यसैले यदि तपाईं उहाँको निशाना महिला हुनुहुन्छ भने, उहाँ तपाईंको शरीर भाषा र पुरुषत्वको माध्यमबाट कसरी आफ्नो ध्यान खिच्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुनेछ।
प्रत्येक महिलाले एक वृश्चिक पुरुष अपरिवर्तनीय यी दुई गुणहरू फेला पार्दछ, विशेष गरी मकर राशिको केटी जस्तो रूढीवादी र व्यावहारिक राशिफल। तर डेटि when गर्ने बित्तिकै उनी ध्यानमा राख्ने पहिलो चीज होइन। मकर राशिको आइमाई भोली दिनमा विश्वास गर्न चाहन्छ।
उनी क्यारियर उन्नति र आत्म-वास्तविकता जस्ता चीजहरूको ख्याल गर्दैनन्। जीवनमा उनको व्यावहारिक दृष्टिकोणको कारण, उनी रोमान्टिक सम्बन्ध र अनुशासित र महत्वाकांक्षी मानिससँग गहिरो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। र, अवश्य पनि, वृश्चिक यस श्रेणीका केटा हुन्।
त्यसैले क्यान्सर, मीन, वृष, कन्या र वृश्चिक, यी संकेतहरू हुन् जुन मकरको साथ उत्तम हुन्छ। आशा छ तपाईंले आजको बिषयको रमाईलो गर्नुभयो। तपाइँको लेख विचारहरु को लागी धन्यवाद छ जुन मनपराउँदछ र तल टिप्पणीहरु छोड्नुहुन्छ।
मकर मिति को हुनु पर्छ?
संकेतहरू जुन यससँग सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छमकरएक वफादार वृषभ र एक व्यावहारिक कन्या समावेश गर्नुहोस्। यद्यपि,aको लागि सबै भन्दा राम्रो खेलहरूको सूचीमा नम्बर एकमकरमहत्वाकांक्षी, गोल-उन्मुख, रहस्यमय वृश्चिक हो।
हे मान्छे। के तपाई आफ्नो जीवनसाथी खोज्दै हुनुहुन्छ? मलाई त्यो दोहोर्याउनुहोस् यत्तिको नाटकीय तरिकामा छैन। के तपाईं आफ्नो साँचो प्रेम खोज्दै हुनुहुन्छ? अझै पसिलो छ? मलाई थाहा छैन ...
के तपाई मिति खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी सधैं मानिसहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं। थोरै हामी जान्दछौं कि उनीहरूको राशि चिन्हले उनीहरूको बारेमा केहि पनि भन्न सक्छ। आज हामी मकर राशि डेटि ofको वास्तविकताहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं।
दुबै सकारात्मक र नकारात्मक के तिनीहरू बौद्धिक छन्? महत्वाकांक्षाको बारेमा के छ? के तपाईं थोरै अप्टिग्ट हुन सक्नुहुन्छ? हामी त्यो सबैको बारेमा कुरा गर्छौं र अधिक ...
मकर डिसेम्बर २२ र जनवरी २० को बीचमा जन्म भएको थियो र यसलाई समुद्री बाख्राको चिह्न भनिन्छ र ग्रह शनिले शासन गरेको छ। तिनीहरू प्राय: वृष, लियो, कन्या, वृश्चिक, र मीनको साथ उपयुक्त छन्। यो महान राशि चिन्ह डेटि when गर्दा त्यहाँ धेरै कुरा जान्न सकिन्छ।
मैले पहिले नै 'गौरवशाली' शब्द प्रयोग गरिसकेको छु त्यसैले तपाईंलाई थाहा छ यो स्मार्टको साथ भेट्ने र ठूलो चित्रको बारेमा सोच्न रोचक हुनेछ। ठिक छ, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि ...
मकरु प्रयोग गर्नुहोस् तर्कसंगत मकर भनेको तार्किक परिभाषा हो। ठीक छ, शाब्दिक होइन। तर यस प्रसिद्ध समुद्री खसीले यसको दैनिक जीवनमा तर्क लागू गर्दछ।
यदि तिनीहरूले पूर्ण रूपमा केहि सोचेका छैनन् भने, तिनीहरूले प्राय: त्यसो गर्दैनन्। अर्को शब्दमा, के काम गर्दछ र के अवस्थामा गर्दैन ...
यसले उनीहरूको डेटि life जीवनमा लैजान्छ, र यसले प्राय: तपाईको सुविधाको लागि काम गर्दछ किनकि तपाइँको प्राकृतिक आवश्यकताले सबै कुरा व्यवस्थित गर्दछ। तपाईंहरू दुई जना डिनर र चलचित्रहरूमा जान भन्नुहोस्। मकर राशिले घर छोड्नु अघि सम्पूर्ण तालिका पिन गर्ने प्रयास गर्दछ, तपाईंले सिनेमाघरमा जानु अघि तपाईंले रेस्टुराँमा बस्नु पर्ने समयसम्म उठाउँदा, तर्कको लागि एक मकरको कला अन्य तरीकाले काममा आउँदछ। पनि जब तपाईंहरू एक अर्कामा पागल हुनुहुन्छ।
यदि मकर राशिले गल्ती गरेको छ भने, तिनीहरूले यसलाई स्वीकार्छन्। तनाव सुरुमा उच्च हुन सक्छ, तर कुनै समय तिनीहरू होसमा आउँछन्। उनीहरूको संगठनात्मक सीपहरू पनि व्यावहारिक कारणहरूले गर्दा घरमा काम गर्दछन्; होइन, तपाईं ती प्राय: सफा स्वच्छ पाउनुहुनेछ।
हुनसक्छ फ्राकहरू सफा गरिरहेको छैन, तर तिनीहरू आफ्नो चीजहरू आफैंमा राख्न चाहन्छन्। तपाईले पार्टनरबाट के चाहानुहुन्छ? ठीक छ, मैले भनें। त्यहाँ डाउनसाइडहरू छन्।
बलमा निरन्तर रहनको यो प्रवृत्ति अलि निराश हुन सक्छ। पक्कै पनि, कसैलाई संगठित गरेर राम्रो लाग्यो। तर जब एक व्यक्ति निरन्तर एक कदम अगाडी रहन कोशिस गर्दैछ, तिनीहरू अलिकति माथि देखिन्छन्।
यदि तपाईंको पार्टनरले यो विशेषता प्रदर्शन गर्दछ भने, तिनीहरूलाई लामो सास लिनको लागि सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। यो संसारको अन्त्य होइन यदि तपाईं अब र त्यसपछि ढिलो गर्नुभयो। त्यसैले AmbitiousCapricorn का महत्वाकांक्षा गहिरो छ।
तपाई निरन्तर अगाडि बढ्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं तिनीहरूको लक्ष्यमा लक्ष्य राख्नुहुन्छ र द्रुत गतिमा यसलाई पछ्याउनुहोस्, यदि मकर राशिले तपाईंलाई साँच्चै प्रेम गर्दछ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई खुशी पार्न केहि पनि गर्नेछन्। जब तिनीहरू आफ्नो जीवनको अवस्थामा सहज हुन्छन्, उनीहरूले उनीहरूको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
तर जब तिनीहरूको जीवनमा कुनै शून्य छ जुन भरिनु पर्छ, अवस्था अलि फरक हुन सक्छ। गोल उन्मुख हुनु तिनीहरूको स्वभावमा छ। जब तपाईं मकरलाई उनीहरूको जीवनको महत्वपूर्ण बिंदुमा भेट्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो संसारको केन्द्रविन्दु नहुन सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ ऊ कुनै खास काममा लागिरहेको छ वा उसको मास्टरको डिग्रीलाई पछ्याउँदै। सम्भवतः तपाईंले आफ्नो ध्यान खिच्नका लागि काम गर्न आवश्यक पर्दछ, र तपाईं उत्साहित जस्तो नहुन सक्नुहुन्छ। तर यसको सामना गरौं, मकरलाई यसको दोष दिन मिल्दैन।
हामी सबैको लक्ष्य छ। यो दृढ रहनको लागि केहि निश्चित संकल्प लिन्छ। मकर राशिको यो संकल्प छ र यसको लागि तिनीहरू केही सम्मानका योग्य छन्। 'नगदले मेरो वरिपरि सबै कुरा नियन्त्रण गर्दछ' मलाई गलत नबनाऊ, मकर राशि सर्वशक्तिमान डलरले नियन्त्रण गर्दैन।
अन्य राशि चिन्हहरू। यी मानिसहरूलाई पैसा कसरी सम्हाल्ने भनेर थाहा छ। आजको महंगा दुनिया मा एक साथी चाहिन्छ जो आटा बचतको बारेमा एक वा दुई चीज जान्दछ।
धेरै मकरहरूले करियरहरू बैंकरहरू, वित्तीय योजनाकारहरू, र व्यापार परामर्शदाताहरूको रूपमा सबै राम्रो पाउँछन्। यदि तपाईंसँग आर्थिक साक्षरतामा धनी कसैसँग सम्पर्क छ भने, तपाईं पक्कै पनि यसलाई मान्न चाहनुहुन्छ। केवल धनी व्यक्ति संग नजिक हुन, यो या त चोट गर्दैन ...
तपाइँले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको मकर पार्टनरले पैसा गुमाइरहेको छ। यो किनकी तिनीहरू डलरको मूल्य बुझ्दछन्। यस गुणले हाम्रो अर्को विन्दुमा पुर्‍याउँछ।
उत्तम, उत्तम, स्टाइलिश, ठाडो रहनुहोस्। यी सबै शब्दहरू हुन् जसले मकरको उत्तम प्रकृति वर्णन गर्दछ। यो राशि चिन्हले सुन्दर चीजहरू र जीवनलाई मूल्यवान् गर्छ, र तपाईंलाई पनि त्यस्तै अनुभव गर्न चाहन्छ।
जब तपाइँ मकर राशि को मिति दिनुहुन्छ, खाना, कला र कपडामा उनीहरूको स्वादबाट आफूलाई छक्क पार्नुहोस्। यदि तपाईं दुबै पार्टीमा जानुहुन्छ भने उनीहरूले सबैभन्दा उत्तम र चम्किलो लुगा लगाउने आशा गर्नुहोस्। यो ठाउँ बाट बाहिर देखा पर्न सक्दछ किनकि यो ग्रिल र सबै हो, तर तिनीहरू विवादास्पद मी सबैको ध्यान आकर्षित गर्दछन्।
याद गर्नुहोस्, यदि तपाइँ मकरुको शैलीको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले भन्न खोजेको होइन कि तपाईं एक अनुचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। मकर राशिको स्तर फिकका लागि केहि विशिष्ट हुन सक्छ। यो तपाईंको गल्ती होईन।
अब मैले महसुस गरें कि यसले मकर राशिलाई अलि अलि राम्रो गरीदियो। उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि उनीहरू आफ्नो कम्फर्ट जोनका बाहिर खोजी गर्न डराउँदैनन्। यदि यो एक विशिष्ट छ भने त्यहाँ एक रेस्टुरेन्ट छ जहाँ तपाईं खाना खान चाहानुहुन्छ वा हिप नयाँ ठाउँ जहाँ तपाईं भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, मकर सम्भवतः तपाईसँग सामेल हुन पाउँदा खुसी हुनेछ।
तर हामी अगाडि बढ्नु अघि, के तपाईं अन्य राशि चिन्हहरूको डेटि habits बानीमा चासो राख्नुहुन्छ? किन तपाईं एक धनु राशि तिथि हुनुपर्छ मा हाम्रो भर्खरको लेख जाँच गर्नुहोस्। साथै, यदि तपाईं अलि गहिरो जान चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको राशि चिन्हको बारेमा तपाईंलाई कस्तो पछुतो छ जाँच गर्नुहोस्। अब फिर्ता मकर मेरो डेटिंगको डेटि ofको वास्तविकताहरूको छलफलको लागि गहिरो रूपमा भाग्छ यदि तपाईं मकर राशिको साथ गम्भीर सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंप्रति तिनीहरूको स्नेह एक भन्दा बढि तरिकामा देखा पर्नेछ।
थोरै मानिसहरू मायामा मकर भन्दा बढी समर्पित हुन्छन्। के तपाईंलाई सम्झना छ कि हामीले के भन्यौं जब मकर राशिले सहज हुन्छ, मकरले आफ्नो सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ। सहि। तिनीहरू आफ्नो जीवनमा मानिसहरूलाई खुशी पार्न आफ्नै तरिकाले बाहिर जान्छन्।
यो विशेष गरी सत्य हो जब तिनीहरू तपाईंसँग छन्। यो जन्मदिन, भ्यालेन्टाइन डे, वा नियमित मिति रात तपाईं एक महान समय योजना गर्दै हुनुहुन्छ।
रमाईलो गर्ने समय महत्त्वपूर्णको रूपमा, एक साझेदारको साँचो वफादारी मापन गरिन्छ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई आवश्यकताको समयमा कसरी मद्दत गर्दछन्। जब तपाईं जीवनमा कठिन अवस्थामा जानुहुन्छ, मकर तपाईंको साथमा हुनेछ। यस्तो सम्भावना छैन कि ऊ उठेर तपाईंलाई छोडेर जान्छ। त्यो उनीहरूमा पूर्णतया atypical हुनेछ, तपाईं खुशी देखी तिनीहरूको प्राथमिकता छ। 'म जिम्मेदार छु' मकरहरूले आफ्नो जीवनभर दायित्वको कडा भावना राख्छन्।
जब केहि गर्न आवश्यक हुन्छ, तिनीहरूले यथासक्य गर्न सक्दछन्। यो अर्को कारण यो यो मायालु चिन्ह पूरा गर्न यति सुविधाजनक हुन सक्छ। न केवल तपाईं आफ्नो प्रतिबद्धताहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ, तर तपाईं आफ्नो जिम्मेवारी पनि लिनुहुन्छ।
यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरूले तपाईंको लागि भार उठाउनेछन्। त्यसैले बस एक नि: शुल्क सवारी लिनुहोस्। अब जहिले पनि तपाईलाई आफ्ना बीएलएलएस तिर्न, वा तपाईंको घर सफा गर्न मात्र सम्झाइनेछ।
मैले बुझें कि कसैलाई तपाईंको व्यवसाय सम्झाउनको लागि यो अलि कन्डसेन्डन्ड जस्तो देखिन्छ। मकर प्रेमको बाहिर यो गर्छ। उनीहरूले महसुस गर्छन् कि तपाई आफैले गर्न सक्ने भन्दा बढि हुनुहुन्छ।
धेरै हार्डडिating हाँसो नगर्नुहोस् मकर राशि भनेको तपाईंको आफ्नै कमेडी शोको अघिल्लो प row्क्तिमा हुनु जस्तो हो। मकर सायद सबैभन्दा रमाईलो राशि हो। तिनीहरूको हास्य को भावना अक्सर जीवनमा गइरहन्छ के हुन्छ।
Ibex को प्रकार बिल्कुल जंगली देखि सुख्खा र व्यंग्यात्मक फरक हुन्छ। जे भए पनि, तपाईंको सम्बन्धमा हाँसोको कुनै कमी हुनेछैन। तर हाँसो कहिलेकाँही अनुपयुक्त समयमा आउन सक्छ।
निश्चित जीवनका क्षणहरूलाई अझ गम्भीर टोनको आवश्यक पर्दछ। केही कारणका लागि, धेरै मकरहरूले यस मेमोलाई यस प्रकारको रूपमा मिसिन छोड्दैनन्, कहिलेकाँही यसले उद्देश्य पूरा गर्दछ। भन्नुहोस् तपाइँ र मकर एक अन्त्येष्टिमा हुनुहुन्छ।
हरेक जो सेवा मा जान दुःखी छ। मकरले उदास वातावरण र तपाईंको कानमा हल्का चुटकिले नोट गरे 'यो ठाउँ एकदम शान्त छ, तपाईंलाई लाग्न सक्छ कसैको मृत्यु भएको छ।' यो चुटकुले सस्तो हुन सक्छ, तर यसले कोठाको असुविधाबाट राहत पनि दिन सक्छ।
हास्य कसरी काम गर्दछ यो अनौठो हो। के तपाईंलाई केही आश्वासन चाहिन्छ? जिम क्यारी, स्टीव हार्वे, र Kate McKinnon सबै हास्य कलाकार मकर साइन साझा। त्यसैले तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको पार्टनर राम्रो कम्पनीमा छ।
के तपाईं कहिल्यै मकर राशिको साथ डेटमा हुनुहुन्छ? के तपाईं मकर हुनुहुन्छ जो यो लेख ठीक मान्दछन्? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्। हामी तपाइँबाट सुन्न चाहान्छौं!
के मकर वफादार छन्?
मकरछवफादार, तर कसैको लागि होईन जो आफ्नो समय खेर फाल्छ जस्तो देखिन्छ। एक पटक तिनीहरूले सही व्यक्ति फेला पारे जो एक समान लगानी छ उनीहरु खुशी खुशी बस्छन्। दिमागमा राख्नुहोस्, यद्यपि कुनै पनि चिन्ह हुन सक्छवफादारयदि तिनीहरू हुन चाहन्छन्।१ 2018 2018।
तपाईं जनवरी मा वा जनवरी मा भन्न?
कहिलेतपाईंप्रस्तावमा 'in' प्रयोग गर्नुहोस् यसले महिनाको कुनै पनि मितिलाई बुझाउँदछजनवरी। प्रस्ताव 'मा' एक विशेष मिति बुझाउँछ। दुबै सहि छन् तर यो प्लेसमेन्ट र वाक्यको प्रकृतिको बारेमा छ।१ २०००
के मकरहरू सजिलै प्रेममा पर्दछन्?
तर एक पटक रोमान्टिक चासो स्थायित्व को लागी जाँच गरीएको छ, ती भित्री पूरा गर्नमकर। तपाईंले तिनीहरूको हास्यको ठूलो भावना, साथसाथै तिनीहरूको नरम पक्ष, उनीहरूलाई दिने प्रकृति र उनीहरूको मायालु हृदय देख्नुहुनेछ। ' त्यो भनेपछि, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइनमकरहैनसजिलै प्रेम मा गिर।२। २०२१
मकर लग्नको लागि कुन चिन्हले विवाह गर्नुपर्दछ?
यहाँ एक जोडीलाई कैप्रक्रीन्सले मनपराउने गुणहरू छन्
अन्तत: मकर सामान्यतया सबै भन्दा मिल्दो हुन्छवृषभ, कन्या, वृश्चिक, र मीन(मिल्दो ज्योतिष मार्फत)। पानीको चिह्नले मकरमा पृथ्वीलाई सन्तुलनमा राख्छ, जबकि तिनीहरूको पृथ्वीले पानीलाई भूईंमा पार्छ।१। २०२१
मकर राशि प्रेम भाषा के हो?
मकर प्रेम भाषा: लक्जरी आइटम (उपहार प्राप्त)
र किनभने तपाईं स्पष्ट रूपमा राम्ररी जान्नुहुन्छ, तपाईं जीवनमा उत्तम चीजहरूको पनि आनन्द लिनुहुन्छ, र तपाईं एक प्रेमी चाहनुहुन्छ जो ती चीजहरूको पनि कदर गर्दछ। केहि भन्दा राम्रो राम्रो छैन जो राम्रो मूल्य बिन्दु मा उच्च गुणवत्ता संग एक टुक्रा चयन गर्न जान्नुहुन्छ जो भन्दा राम्रो छ।२। २०२०।
के मकर सम्बन्ध खराब हो?
मकरउनीहरूको महत्वाकांक्षाका लागि परिचित छन् तिनीहरू प्राय: वर्काहोलिक्सको रूपमा वर्णन हुन्छन्, वास्तवमा र जब तिनीहरू एकमा हुन्छन्सम्बन्ध, तिनीहरूले अपेक्षा गर्छन् उनीहरूको प्रेमीको ड्राइभ या त उनीहरूसँग मिल्छ वा बढी छ। जबकि 'शक्ति जोडी' कुरा रमाईलो हुन सक्छ, जब एक पार्टनरले अर्कोमा धक्का दिन्छ, असन्तोष र असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ।१ 2018 2018।
के मकरुहरू ओछ्यानमा राम्रा छन्?
को रूप मामकर, तपाईं संवेदनशील र कामुक हुनुहुन्छओछ्यान। तपाईं आफ्नो क्षमताको सर्वश्रेष्ठमा पूरा गर्नको लागि अर्को कार्यको रूपमा लिंग देख्नुहुन्छ - जसको मतलब हो कि तपाईं सधैं आफ्नो साथीलाई सन्तुष्ट पार्न आवश्यक समय र प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ!२। २०२०।